Somali News 05.11.21 | KWIT
Maanta gudoomiyeyaasha ka socda 19 gobol, oo ay ku jiraan dhammaan saddexda gobol ee Siouxland, ayaa soo saaray warqad wadajir ah oo ay ugu baaqayaan madaxweyne Joe Biden inuu tallaabo degdeg ah ka qaado waxa ay ugu yeereen "dhibaatada ka taagan xadka koonfureed".
Waxay yiraahdeen maadaama tirada soo-galootiga muhaajiriinta ah ay gaareen heerkii ugu sarreeyay muddo 20 sano ah arrintuna aysan aad u weyneyn in la iska indhatiro.
Golaha Sioux City Community School wuxuu heshiisyo la galay ururo matala macalimiinta iyo xubnaha shaqaalaha shirkii xalay ee guddiga.
Macallimiinta haysta shahaadada koowaad waxay arki doonaan $ 540 mushahar kordhin ah. Mushaharka bilowga ee macallinka sanadka koowaad ee Sioux City wuxuu hadda ka badan yahay $ 43,000.
Marka lagu daro mushaharka iyo faa'iidooyinka, kororka wadarta xirmada wuxuu ka badan yahay 2.4%.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaan ku soo warrameynin dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo ku dhowaad 300 xaaladood oo cusub, oo ay ku jiraan darsin ka tirsan Gobolka Woodbury.
Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota ayaa shaacisay qorshooyinka rugta talaalka sabtiga. Dadku waxay qaadan karaan qaadashada koowaad iyo labaad ee Xarunta Kuleejka ee Koonfurta Sioux City laga bilaabo 10-ka subaxnimo ilaa duhurkii.